Iidayimani zeTetra | Ngeentlanzi
Kwimeko apho ubungazi, zininzi iintlanzi zamanzi acocekileyo ezisemngciphekweni wokuphela, kungekuphela ngenxa yokuloba okungakhethiyo kodwa nangenxa yokutshatyalaliswa kwendalo yazo. Nangona kunjalo, ngokuqinisekileyo ayinakuze ithi qatha ezingqondweni zakho ukuba le ntlanzi yaziwa njenge IDayimani yeTetra, Isilwanyana saseVenezuela, yiba sesinye sazo. Nangona ezi ntlanzi zininzi kakhulu kwaye zinokuphakanyiswa ngokulula kwiitanki, ziyanyamalala kancinci kwimilambo yaseVenezuela.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba intlanzi yokuhombisa Eyaziwa njenge-tetras, babonakaliswa ngokuba noluhlu lwangaphakathi lwamazinyo, ngokuba nethambo elingaphantsi kwamehlo abo, inxalenye yomzimba wabo ngaphandle kwezikali, nangokuthi bangabinayo keel ethe nkqo. Iintlanzi zeetetras zeqela le-tetragonopterini. Kwaye kukho iintlobo ezahlukeneyo.
Olunye lwezi ntlobo, i Moenkhausia, okanye idayimani ze-tetra, bathiywa igama lokuhlonipha ugqirha wezilwanyana uWilliam J. Moenkhaus, kwaye babonakaliswa ngamazinyo omeleleyo kunye nezikali ezingcolileyo emzimbeni wabo. Ukongeza koku banekota yomsila wokugqibela kunye nezikali, ngelixa umzimba wabo unezikali ezinamava amancinci kumphezulu wazo. Ngokubanzi kwimeko yazo yasendle, ezi zilwanyana zinamaphiko emqolo kunye nasezimpundu ngemibala emihle emfusa.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba idayimani yeetraan iintlanzi zivela kwi IChibi laseValencia eVenezuela, ke ukuba ufuna ukubanakho kwi-aquarium yakho ekhaya, kubalulekile ukuba ichibi libe namandla ngaphezulu kweelitha ezingama-80, nokuba linezityalo ezaneleyo ngasemva nasemacaleni, kwaye ukongeza i-peat kwinkqubo yokuhluza. Ndikwacebisa ukuba usebenzise umhlaba omnyama kunye nokunciphisa ukukhanya ukuze ukwazi ukulingisa indawo yokuhlala yendalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Iidayimani zeTetra
uMaria Pinto sitsho
Ndenza uphando ngomzukulwana wam u-Angel de Jesus malunga nale ntlanzi kwaye unomdla kwaye ukhathazekile ngokuphela kwayo
Phendula u maria pinto